Fanantenan’ny Indiana Sy Pakistaney Hiala Amin’ny Fifandrafiana Ho Any Amin’ny Finamanana · Global Voices teny Malagasy
Fanantenan'ny Indiana Sy Pakistaney Hiala Amin'ny Fifandrafiana Ho Any Amin'ny Finamanana
Voadika ny 14 Janoary 2016 3:30 GMT
Sioka avy amin'i Vivek Krishna Tiwari (@vivek6749), mpianatra lalàna: “Ny ilaina ora dia fihavanana, saingy indrisy misy ireo singa miezaka mamily anay amin'izany lalana izany #aaghazedosti”
Tsy mbola nisy ny fotoana nifankahazoana teo amin'i India sy Pakistan nandritra ny enimpolo taona nifanakaikezan'izy ireo nampandroso an'i Azia Atsimo. Nanamaloka ireo zavatra niraisana azo tsapain-tanana ireo fifandirana ara-politika sy ny tatitry ny haino aman-jery ary nandrisika ny olona hijery ny mpiaramonina amin'ny sisintany ho fahavalony.
Saingy nisy ireo olon-tsotra sy vondrona isan-karazany nanao ezaka hampiroborobo ny fahatakarana sy ny finamanana mba hitondra fihavanana maharitra, toy ny Indo-Pak Peace Calender, izay manasongadina sary hosodokon’ ny mpianatra ao amin'ny firenena roa tonta. Notontosaina tao amin'ny Foibe Ara-kolontsaina Islamika ao New Delhi tamin'ny 10 Janoary 2016 ny andiany faha-efatra.
Nokarakarain'ny Aaghaz-e-Dosti (Fiandohan'ny Finamanana), fikambanana miasa manamora ny fifandraisana sarotra eo amin'i India sy Pakistana ny hetsika. Miasa amin'ny alalan'ny ekipa fototra ahitana mpikambana am-polony mahery ao India sy Pakistan ny vondrona.
Tontosaina androany amin'ny 4 ny alimanaka filaminana Indo Pak-iza no hoavy?
Tantaran'ny fifandraisana marefo
Iray ihany i India sy Pakistan fahiny. Saingy tamin'ny taona 1947, nozarain’ ny Britanika ny Faritany Mizakatenan'i Pakistan (lasa Repoblika Islamikan'i Pakistan sy Repoblika Entim-bahoakan'i Bangladesh taty aoriana) sy ny Firaisan'i India (lasa Repoblikan'i India taty aoriana) noho ny antony ara-pivavahana voalohany indrindra, ho valin'ny fifanolanana teo amin'ny Hindoa sy ny Silamo ao amin'ilay efa lasa zana-kaontinanta. Voatery nifindra monina ny mponina avy amin'ny andaniny sy ankilany, ary niteraka fikomiana sy herisetra ny fisarahana.
Mbola saro-takarina, na izany aza, ny filaminana antenaina ho entina manerana ny fizarazaran’ ny zana-kaontinanta Indiana. Indraindray latsaka anaty ady ireo firenena manodidina. Ankoatra izany, vao mainka nampitombo ny ahiahy eo amin'ny roa tonta sy nanamafy ny tsy fifampitokisana ny ady sisin-tany ao amin'i Kashmir sy ny fanafihan’ ireo vondrona milisy .
Niaina fihodikodinam-panantenana vaovao hatrany ireo mpikatroka ny fihavanana andaniny sy ankilan'ny sisintany, isian'ny hirika kely ara-diplaomatika vaovao na ady mitam-piadiana mandrava ny fanantenan'izy ireo. Vao haingana indrindra, nanova ny diany hiainga avy tao Afghanistana hamonjy an'i India noho ny fijanonana tampoka tao Lahore, Pakistan, tamin'ny faran'ny taona 2015 teo ny Praiminisitra Indiana Narendra mba hihaona amin'ny Praiminisitra Pakistaney Nawaz Sharif, nitondra tsirim-panantenana teo amin'ireo mpikatroky ny fihavanana izany. Efa nihoatra ny folo taona mahery lasa manko izay ny nitsidihan'ny praiminisitra Indiana an'i Pakistan, nitondra fanantenana be dia be amin'ny hoavin'ny fametraham-pihavanana eo amin'ireo firenena ny fitsidihan'i Modi.
Saingy toy ny fotoana maro teo aloha, sendra ny vato misakana ny lalana hoany amin'ny fihavanana. Tamin'ny 2 Janoary, nanafika ny Toby Miaramila Indiana ao Pathankot ny vondrona lehilahy mitam-piadiana mahery vaika. Nilaza fa tompon'andraikitra tamin'ny herisetra ireo milisy ao Kashmir, saingy tsy nanakana ny sasany hiahiahy ny ratsy indrindra momba an'i Pakistan mifanolobodirindrina izany. Namoaka fanambaràna milaza ny fanafihana ho toy ny fikasan’ i Pakistan hanakorontana ny Punjab sy mandrahona ny firaisana sy ny fahitsian’ i India ny lehiben'ny Minisitry ny Punjab Indiana, Parkash Singh Badal, miaraka amin'ny lefitry ny Lehiben'ny minisitra Sukhbir Singh Badal, na dia nanameloka ny fanafihana koa aza i Pakistan tenany.
‘Vakio ireo fefy ireo ary andeha hihaona am-pitiavana’
Amin'ny fotoana tahaka izao, nanatri-maso fankaherezana feno fikasana tsara tamin'ny alalan'ny diezy #AaghazeDosti ny Twitter, mitovy amin'ny nataon'ny fikambanana nandrindra ny fanatontosana ny fotoanan'ny fihavanana izany. Nandefa hafatra manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fihavanana eo amin'i India sy Pakistan miady amin'ireo lafin-javatra hafahafa tsy mety afaka maromaro ny mpiserasera:
Andeha hametraka ny fitaovam-piadiana isika rehetra ary hizara fitiavana!
#AghazeDosti #aghazedosti Hatred between Pakistan and India has expanded scope of proxy wars and economy of war at the cost of people. — Khadim Hussain (@Khadimhussain4) January 8, 2016
Nahamaro ady ambadika maro sy ny nanabe voho ny toekaren'ny ady sandaim-bahoaka lafo ny fifankahalana teo amin'i Pakistana sy i India.
Vakio ireo fefy ireo ary andeha hihaona am-pitiavana
India and Pakistan are sister nations.. We have so much in common.. A united India-Pakistan will be better for everyone 🙂 #AaghazeDosti — Hayan! (@Hayan_khann) January 8, 2016
Firenena mpirahavavy i India sy Pakistan. Betsaka ny zavatra iombonana. Tsara kokoa ho an'ny rehetra i India-Pakistan tafaray 🙂
Hatramin'ny oviana ny ady no vahaolana? aorian'ny ady, tontosaina ny fifampiresahana koa nahoana no tsy nanao izany isika taloha ary izay koa no fomba tokana?
Until when our generations will live in wilderness & hatred. We r mockin ourselves in eyes of world if we continued like this. #AaghazeDosti — Asad Shehzad Khan (@asadshehzadkhan) January 8, 2016
Mandrapaha-oviana ny taranatsika no hiaina ao anaty habibiana sy fankahalana. Manimbazimba ny tenantsika eo imason’ izao tontolo izao isika raha mbola manao tahaka izao hatrany
If Politicians can't bring peace to the region, the public can do it.. #AaghazeDosti #indopak #IndoPakTalks pic.twitter.com/uLASlQmQ3A
Raha tsy afaka mitondra fihavanana ao amin'ny faritra ny politisianina, afaka manao izany ny vahoaka
India and Pak both allot the maximum money in Defence budget. Both are the worst performing nations in human index. Time for #AaghazeDosti — Abbas Haider (@abbas_haiderr) January 8, 2016
Manokambola faratampony ao amin'ny tetibolan'ny Fiarovana na i India na i Pakistan. Samy firenena ratsy indrindra eo amin'ny tondro maha-olombelona izy roa tonta. Fotoana izao hanaovana ny #AaghazeDosti
— Aashna (@suriaashna) January 8, 2016
Atakalozy fitiavana ny fankahalana, fahanginana ho an'ny herisetra!
Ilaina matetika ny fifandraisana mahaolombelona hanorenana fihavanana, araka ny nohazavain'i Namra Nasir, mpandrindra ny ny Aaghaz-e-Dosti, sampana ao Lahore tamin'izy nitantara ny zavatra niainany tamin'ny nitsidihany an'i India:
This memorable excursion broke many stereotypes and brought me to a verge of thinking that if compared with the rest of the world, we are very recognizably similar, equally welcoming and extremely loving. […]
Vividly, ‪‎peace‬ and ‪‎humanity‬ is the priority on both sides of the border. I earned so much love in India that I forgot that I wasn’t in Pakistan.
Nanafoana ireo fitsarana an-tendrony marobe ity fitsidihana tsy hay adinoina ity ary nitondra ahy nieritreritra fa raha oharina amin’ izao tontolo izao, ekena tanteraka fa mitovy isika, samy tia mandray vahiny sy be fitiavana loatra. […]
Mazava tsara, laharam-pahamehana eo amin'ny roa tonta andaniny sy ankilan'ny sisintany ny fihavanana sy ny maha-olombelona. Nahazo fitiavana betsaka tao India aho ka adinoko mihitsy fa tsy tao Pakistan aho.
Novidian'ny firenena roa tonta lafo ny korontana ara-politika lavareny eo amin'i India sy Pakistan, mandritra ny harenan'izy ireo. Manantena na dia izany aza fa hisy fiantraikany eo amin'ny fanapahan-kevitra ara-politika amin'ny ho avy ny hevi-bahoaka, tsy nisalasala naneho ny fikasan'izy ireo ho an'ny fihavanana ny olom-pirenena, tsy ho resaka maika ara-politika ihany fa hanatsara ny finamanana naharitra taonjato maro – teraka tamin'ny fiaramonina niraisana ihany koa- talohan'ny nisian'ny fankahalana. Hihaino ve ny mpitondran'izy ireo?